Jereo ny lafiny-fahazarana pachinko efi-trano [Rom ahevaheva asan'ny fanahy]
トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Jereo ny lafiny-fahazarana pachinko efi-trano [Rom ahevaheva asan'ny fanahy]
Hit teo, dia miova eo amin'ny fanantenana sy ny tahotra, ary tsy nahavoa ihany koa, heveriko fa pachinko ny tena fahafinaretana. Na izany aza, raha ny hira dia, ny zavatra sasany izay mampita Chang, raha tsy voa tsy namely mihitsy, dia mety ho ny olona sasany izay efa nihevitra azy io ho ny antony. Ao
, fa tsy nahavoa hira, miresaka ny toerana sy ny fomba tapa-kevitra, ny tsirairay amin'ireo milina pachinko, ianao anisan'ny ROM izay nametraka. ROM ary dia ny loteria jackpot, ny milina ny fandaharana, na mba hahazo antoka ny hira, dia lalan-anjara. Dia ny pachinko milina ao am-po. Raha
ohatra ny manao hoe: pachinko jackpot loteria dia tahaka ny roulette, iray manodidina iray fihodinan'ny roulette, miezaka sary an-tsaina fa isan-Manamarina raha nataony an-jackpot. Izany dia, Heveriko fa mora ny hahatakatra mihevitra ny efa nentina avy tao an-ROM. Tapaka ROM dia, ny mety ho hira misambotra be no ho lehibe ny hira mety ho pachinko milina.
izay antsoina hoe ny indray ROM dia, Uchikata tahaka izay efa nanapa-kevitra, dia ho mora esorina ny ny isan-, milaza fa tsy ara-dal?na ROM. Na izany aza, ao amin'ny ankamaroan'ny pachinko efi-trano, ka tsy tapaka isika, miasa ao amin'ny Rom sisa tavela izay tonga avy any amin'ny mpanamboatra, saingy tamin'ity indray mitoraka ity, Te-hijery ny famakiana ny fahazarana tsy tapaka ROM.
tapaka ROM, tiantsika ny hifindra tany eny an-dalambe jackpot mety. Raha iray amin'ireo mety ho 340 minitra, namely ny andro, mamerina ny andro tsy voa, zavatra ianao mba miezaka ny converge akaiky ny mety. Ao amin'ny ohatra, raha tsy misy andro vitsivitsy isan-, satria miezaka ny hifindra tany ny mety arabe, ary avy hatrany. Izao no voalaza fa ny alon-jackpot, dia satria ho tampoka dia na ejection payout. Ary avy
, miverimberina, na tsy nivoaka, dia mikasika ny momba ny iray volana, ianao hoy converge ho eny an-dalambe jackpot mety. Raha hamaky ny alon-volana izany, dia ny hoe Vakio ny fahazarana tsy tapaka ROM. Fanteno ny modely ho manahy ny, amin'ny alalan'ny ny pachinko isan'andro efi-trano, aza mivoaka ny andro dia nanaraka ny andro maro, ao Hatraiza ny Mandritra izany fotoana izany ny toe-tsaina, na eo amin'ny firy izao ny haninjitra baolina nivoaka, Dia haka ny antontan-kevitra mitovy.
izany, ary mbola mitohy ny volana vitsivitsy, ny alon-latabatra, ilay antsoina hoe lal?n'ny ho hitanao. Tamin'ny fotoana tsara ny onja, raha ny fampiasam-bola, dia midika izany fa fandresena isan-jato dia azo inoana fa ny hitsangana. Ao amin'ny pachinko, tsy manana milina fototra fivakisana. Mandrosoa ny baolina dia satria tsy midika hoe mandresy 100%. Na izany aza, ao amin'ny pachinko efi-trano, nataony teo am-tahan'ny fahan'ny vidiny sy ny payout, ny tahirin-kevitra izay ny milina raraka hivoaka tahaka ny lanjan'izy ireo dia avy hatrany isa nikajy isan'andro.
amin'izao fotoana izao, inona no nivoaka isan-jato izany, raha ny raharaham-barotra vita, fantatro avy hatrany. Ao amin'ny
pachinko parlors, izay vonona ny hanao ao amin'ny milina, dia ho niresaka momba ny iray natao tao hatraiza ny lohako. Kosa ianao faharetana na mitaky herin 'ny fandinihana, nefa tsy hidika mihitsy aza hoe misy ny antoka fa avy tokoa. Na inona na inona tsy misy mieritreritra, noho mitohy an-jambany avy, Heveriko fa tsara kokoa ny mino fa araka izay handresy mitombo ny isan-jato. Rom dia, satria misy teny ao latabatra pachinko milina rehetra, raha liana, azafady miezaka hanohitra.
raha mahita amin'ny alalan'ny zatra
Horukon, dia tokony ho afaka misintona ny fandresena amin'ny avo mety ho afaka hamaky na dia ny onjan'ny miara-ROM. Izany no. Na inona na inona tsy misy mieritreritra, noho mitohy an-jambany avy, Heveriko fa tsara kokoa ny mino fa araka izay handresy mitombo ny isan-jato. Rom dia, satria misy teny ao latabatra pachinko milina rehetra, raha liana, azafady miezaka hanohitra.
Horukon, dia tokony ho afaka misintona ny fandresena amin'ny avo mety ho afaka hamaky na dia ny onjan'ny miara-ROM.